sydney sekeramayi on News24
ARTICLES RELATING TO SYDNEY SEKERAMAYI
Top Africa stories: Zimbabweans queue for hours for fuel, polygamy persists across Africa
Zimbabweans are having to queue for hours simply to get petrol for their vehicles, and Zanu-PF bigwigs reportedly 'owe their farm workers thousands of US dollars in unpaid wages and allowances'.
Zimbabwean President Robert Mugabe says he won't be pushed out of office, as he remains adamant that he is representing the "interests of the people who elected me into office".
A leaked confidential ministerial document says Zimbabwean President Robert Mugabe, 92, might be in trouble after the country's former freedom fighters declared that they no longer want him to lead the southern African country.
Zimbabwe’s home affairs minister says the government won’t tolerate any attempt to undermine peace in an apparent threat against a huge march by opposition parties on Friday.
The youth wing of Zimbabwean President Robert Mugabe’s ruling Zanu-PF party has proposed that the nonagenarian should be allowed to die in office.
Zimbabwean President Robert Mugabe has urged his country and South Africa to stand together to protect their economies against cyber attacks.
Zimbabwe Defence Minister Sydney Sekeramayi's home in an affluent suburb of Harare is so big that the police officer guarding it "failed to notice" a break-in, a report says.
Zimbabwe's war veterans have demanded to be paid at least $500 000 each, which could cost the country up to $17bn - about five times the nation's 2016 National budget of $3.6bn, a report says.